I-OPPO F11 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-OPPO F11 Pro iye yaziswa ngokusemthethweni
Kwezi veki sinenqwaba yamarhe kunye nokuvuza malunga ne-OPPO F11 Pro. Ekuqaleni konyaka ipowusta evuzayo yefowuni, apho ubukho benzwa ye-MP ye-48 ikhankanyiwe okokuqala. Kule veki, idatha entsha ibifikile, ukongeza kwi ukuvuza ividiyo onokuthi uyibone uyilo ifowuni ngokupheleleyo.
Ekugqibeleni, Le OPPO F11 Pro sele ihanjisiwe ngokusemthethweni. Uphawu lwaseTshayina luququzelele umsitho eIndiya, apho yonke into malunga nale fowuni ityhiliweyo. Umsitho ongakhange ube nasiphumo sikhulu kumajelo eendaba, kodwa loo nto isivumela ukuba siyazi le modeli.
Kwakungekho umhla wentetho yefowuni. Kuba, lo msitho webrand uthathe abaninzi bothukile. Kodwa ubuncinci sele siyazi ukuba le fowuni isigcinele ntoni. Imodeli ekufanele ukuba iphehlelelwe eYurophu, njengezinye iimodeli zohlobo lwesiTshayina.
1 Ukucaciswa kwe-OPPO F11 Pro
Ukucaciswa kwe-OPPO F11 Pro
Uyilo lwefowuni lunokukhumbuza uninzi lwegama lokufumana i-X, ebithengiswa iinyanga ezimbalwa eSpain. Ukubheja kuyilo lwekrini yonke, kunye neefreyimu ezincinci kakhulu, ezikuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili. Ukongeza, sifumana ikhamera yangaphambili yesilayidi. Kwinqanaba lobugcisa, le OPPO F11 Pro yimodeli ekumgangatho ophakathi. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-IPS LCD ene-6,53-intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo (2.340 x 1.080)
InkquboImediaTek Helio P70
Cámara trasera: 48 MP ngokuvula f / 1.8 kunye ne-5 MP nge-f / 2.4
Inkqubo yokusebenzaI-Pie ye-Android enemibala ye-6
Ibhetri: 4.000 mAh nge-Super VOOC ehlawulisa ngokukhawuleza
ConectividadI-4G LTE, i-WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, iBluetooth 4.2, iGPS GLONASS kunye nohlobo C lwe-USB
abanye: Inzwa yeminwe yeminwe, i-NFC,
Ubukhulu: 161,3 x 76,1 x 8,8 mm
U bunzima: Iigram ezili-190
Iikhamera ezityibilikayo zixhaphake kakhulu kwezi veki kwintengiso ye-Android. Ukongeza, sinokulindela ukuba iifowuni ezininzi ezizisebenzisayo ziya kuphehlelelwa kungekudala. Indlela ekuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili lefowuni ngeyona ndlela ibalaseleyo. Kule OPPO F11 Pro sinephambili elihlala kwi-90,90% yangaphambili.
Iikhamera ziyinxalenye ebalulekileyo yale fowuni. Kwiiveki ezidlulileyo besele kusaziwa ukuba ifowuni izakufika ngenzwa ephambili ye-MP eyi-48. Sibona iimodeli ezimbalwa kwi-Android ezisebenzisa olu hlobo lwenzwa. Kule meko imodeli nayo, ethi ibe yiyo kuqala ukusebenzisa i-10x zoom zoom Yophawu, leyo thaca kwi-MWC ekupheleni kukaFebruwari e-Barcelona. Itekhnoloji ekulindeleke ukuba inkqubela phambili kuyo kwiikhamera zeefowuni zorhwebo.
Ibhetri yenye indawo eyomeleleyo kwi-OPPO F11 Pro. Ifika ngomthamo we-4.000 mAh, Ngaphandle kwamathandabuzo sisikhundla esifanelekileyo esiza kubonelela abasebenzisi ngokuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Ukongeza, sele iza nentlawulo ekhawulezileyo yohlobo lophawu, yenye yezona zidume kakhulu kwi-Android kwaye iimveliso ezininzi ziya kuyisebenzisa kungekudala.
Ngomhla ekuya kuthi kusungulwe ngawo i-OPPO F11 Pro ezivenkileni, asinazo iindaba okwangoku. I-Indiya izakuba yintengiso yokuqala eza kuqaliswa, into ekufuneka yenzeke kungekudala. Emva koko, iya kuphehlelelwa kwezinye iimarike zaseAsia. Kuyatshiwo ukuba le modeli yophawu iya kuphehlelelwa eSpain, apho uphawu bezama ukungena khona iinyanga. Nangona singekakwazi ukuqinisekisa oku ukuza kuthi ga ngoku.
Okwangoku kuphela lixabiso elityhiliweyo elithengiswayo eIndiya, ubuncinci beenguqulelo. Iya kuba malunga ne-312 euro yokutshintsha. Kulindeleke ukuba kubekho iinguqulelo ezimbini zefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwayo. Ukongeza, iya kuthengiswa ngemibala emibini, zombini zinefuthe lomgangatho. SineNdudumo emnyama kunye ne-Aurora Green.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO F11 Pro iye yaziswa ngokusemthethweni
I-OPPO F11: Inguqulelo encinci yeF11 Pro
I-Mountain View Guys Yandisa iGoogle kuShishino lwam ngeShishini lokuThengisa iCarousel